Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si kulul u cambaareeyay weerarkii subaxnimada lagu qaadey Hotel Saxafi, waxaana uu tacsi u diray qaranka, qoysaska iyo ehaladii ay ka geeriyoodeen shacabka aan waxba galabsan ee Al Shabab ay laayeen.
“Hotel Saxafi Subaxnimadii waxaa weerar ku qaadey Al Shabaab. Sida muuqata Al Shabaab waxaa si weyn u saaran culeys, iyagoo laga saarayo goobihii ay ku dhuumaleysanayeen, taasina waxay ka dhalatey hawlgalka milatari ee sida wanaagsan u qorsheysan iyo guulaha ay sida wadajirka ah u gaarayaan Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo Ciidammada Midowga Afrika ee AMISOM. Sidaa darted Al Shabaab waa naf la caari doonaya inay dhibaatooyin ka abuuraan magaalooyinkeena,” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marxuumiinta geeriyooday u duceeyay.
“Waxan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii jannada fardowsa ka waraabiyo inta dhimatey ee Al Shabaab ay laayeen. Sida ugu wanaagsan ee dadkan naga baxay aan ku xusi karnaa waxaa weeyaan inaan dib u cusbooneysiino, isla markaana aan kordhino dadaalka aan ugu jirno inaan ka hortagno kooxaha xagjirka in aanay si khaldan ugu baahin diinta Islaamka, iyagoo ujeedkooda uu yahay inay dadka marin habaabiyaan, burbur iyo xasuuqna u geystaan shacabka. Qaabka aan arrintan uu wajahayno ayaa ah inaan si buuxda uga hortagno fikradaha khaldan ee la beddelay, isla markaana aan dib uga xorreyno meelaha ay ku harsan yihiin ee dalka Soomaaliya’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa ugu dambeyntii Madaxweynaha uu sheegay in amniga uu weli yahay muhimadda koowaad ee dalka.
Dawlada Itoobiya oo ka hadashay dhibaatada ka soo gaartay Ciidamada Kenya Weerarkii Gedo ka
Ilaa 8-ruux oo ku geeriyooday qaraxyo ka dhacay Hotel Central ee magaalada Xamar
Faah faahin horu dhac ah oo ka soo baxaya weerarkii Magaalada Baydhabo .
Sacuudiga oo maanta qaaday dhaawacyadii ka haray dadkii ku dhaawacmay Hotel Central ee Magaalada Xamar.